Nri bara ọgaranya na vitamin D3: Lee ndepụta ya na onye ọ bụla | 10000 nkwa!
Eggplant lasagna: tọrọ ụtọ na ihe bara uru Ezi ntụziaka n'ihi na ị na-enwe!
Alimentos	 9 January 2019
A vitamin d3 zụta ọ bụ mkpa nke mmadụ ọ bụla, ọkachasị ụmụ nwanyị, ọ dịkwa na ụzarị anyanwụ. Nke a bụ ụzọ kachasị mfe ị ga - eji nwee vitamin D n’ahụ gị, n’anwụ n’anyanwụ, n’oge obere nsogbu ma chebe ya ka ị ghara inwe ọkụ n’ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ụfọdụ echeghị, enwerekwa nri bara ụba na vitamin d3 .
N'isiokwu ndị na-esonụ ị ga-amụta ụzọ a ọzọ iji nweta vitamin D. Nri, otu esi eri ha, ihe ndi ozo di na ha, na ozi ndi ozo di nkpa. Lelee!
Nri bara ọgaranya na Vitamin D3 na Zinc
Zinc bụ nnu dị ezigbo mkpa maka ịnweta ndụ mmadụ. N’otu ntabi anya, ụfọdụ nri bara ọgaranya na zinc yana n’ime ọnụahịa vitamin d3 . Ndị a bụ anụ, ọkachasị ndị nke ọtụtụ mmadụ jụrụ ajụ, dịka anụ ehi na umeji ọkụkọ, mmiri mmiri, sardines na tuna mkpọ, na ọbụna mmanụ imeju.
Vitamin D3 10000 ui na calcium
Calcium dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke gland thyroid-niile dị mkpa, na mgbakwunye na ịkwalite ike nke ọkpụkpụ ahụ mmadụ. Ya mere, nri ndị jupụtara na calcium nwere oke mkpa maka ụmụ mmadụ.
Enwere ike ịchọta otu nri a nnukwu ego nke calcium na vitamin D. Nke a bụ ihe banyere mmiri ara ehi na ngwaahịa mmiri ara ehi, sardines mkpọ, salmọn, walnuts, chestnuts na linseed.
Mụta banyere mkpa vitamin A dị!
Ndepụta nri kacha mma juputara na vitamin D
Nri kachasị mma maka inweta vitamin D ịchọrọ n’ụbọchị gị bụ:
Sardine na tuna
Ihe ndị a bụ nri ndị bụ isi, ndị nwere vitamin D karịa, mana ọ nweghị nke dị mma karịa anyanwụ. Iri abuo nke ikpughe na ìhè anyanwụ n'oge obere ihe zuru ezu maka gị ịnweta vitamin a dị mkpa n'ọtụtụ zuru oke maka ndụ gị.
Marakwa nri ndị nwere vitamin b12!
Vitamin D na-achịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahụ mmadụ n'ozuzu ya, yabụ ụkọ ya nwere ike ibute onye ahụ nnukwu nsogbu, gụnyere usoro dị oke mkpa dị ka obi obi.
Ọ bụ ya mere inwe vitamin D zuru oke dị mkpa maka ahụ gị iji rụọ ọrụ nke ọma yana usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ka ị nwee ike na-arụ ọrụ.
ezughị d3 vitamin 10000 ui , ị nwere ike ịda mbà, nsogbu ọkpụkpụ, ọrịa shuga, ike ike, ọrịa obi, flu, oyi, ọrịa autoimmune na ụdị ọrịa kansa.
N'ime ụmụ nwanyị, nlebara anya a kwesịrị ịdị ọbụna karị. Enweghị vitamin D na-ebute ụmụ nwanyị dị ime nnukwu ihe egwu, nne nwekwara ike ime ọpụpụ na ọbụnadị na-ebute ọbara mgbali elu na nne, nke dị oke egwu n'oge ọ na-amụ nwa.
Kedu ihe egosiri na-egosi?
Kwa ụbọchị, vitamin D na-enye mmadụ 5 ruo 10. 90% nke a na-enweta site na kọntaktị kpọmkwem na anyanwụ, nke kwesịrị ịdị kwa ụbọchị ma ọ dịkarịa ala minit 20. Ndị ọzọ, site na iji nri dị mma, nke kwesịrị ekwesị, nke siri ike, ị nwere ike iri.
Kedu ihe dị mma maka ịba ụba vitamin D?
Na mgbakwunye na anyanwụ na nri ndị jupụtara na vitamin D, otu nhọrọ a na-enyefe ọtụtụ ụmụ nwanyị dị ime bụ ị supplementụ mgbakwunye vitamin D, emere na laabu. Ọ na - enyere aka idobe ogo nke vitamin na ihe dị mkpa na ahụ ụmụ nwanyị yana ụmụ nwoke.
Dị ka o kwesịrị, onye ahụ na-enweta nri a site na nri ndị jupụtara na vitamin D yana site na kọntaktị na anyanwụ. Yabụ, na-emekarị, a na-egosi mgbakwunye ahụ maka ụmụ nwanyị dị ime, ndị chọrọ ọtụtụ vitamin iji nwee afọ ime dị mma.
Were naanị vitamin D mgbakwunye ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya ma dọkịta gị agwa gị. Ma ọ bụghị ya, ị ga-emefu ego n'efu. Site n'inwe nri na-edozi ahụ na ijikọ anwụ na-acha, ogo nke vitamin D ezuola oke maka ibi ndụ dị mma ma dị mma, n'atụghị ụjọ inwe ọ beingụ.
Ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nri bara ụba na vitamin D, hapụ okwu gị n'okpuru!
Ngwa 6 iji cheta ị drinkụ mmiri!
Hyperhidrosis: Ghọta ihe niile gbasara ọrịa ị ofụbiga mmanya ókè!
Mmanụ Osisi Tii: Ọgwụgwụ nke Pimim! Ghọta ihe mere o ji arụ ọrụ!
Hemorrhoid: N'ime na mpụta, gịnị bụ mgbaàmà ya, na ọgwụgwọ kacha mma? Jụọ ajụjụ gị!
Erysipelas: Kedu ihe ọ bụ? Olee otú na-emeso? Kedu ihe mgbaàmà? Ọ na-efe efe?